डा आयुषमान घिमिरे
असार १२, २०७५ मगलवार १९:२४:१२ प्रकाशित
छालामा केही सेतो देखिने बित्तिकै दुबी भन्ने गरिन्छ । हरेक सेतो दाग दुबी हँुदैन । दुबी विभिन्न थरीका हुन्छन् । एउटा खैरो दुबी हुन्छ, अर्को सेतो दुबी हुन्छ ।
खैरो दुबी मान्छेको ढाडमा, घाँटीमा कपडाले छोप्ने भागमा हुन्छ । यो फंगल इन्फेकसनले गर्दा हुने गर्छ । पसिनाले फंगल बढेर हुने गर्छ । यस्तो खालको दुबी महिना दिन उपचार ग¥यो भने निको हुन्छ ।
सेतो दुबी भनेको भिटिलिगो पनि भनिन्छ । भिटिलिगो भनेको शरिमा रंग बनाउने मेलानोसाइट्स भन्ने तत्व हुन्छ, जुन तत्व छालको दुईटा तहमध्य सबैभन्दा मुनिपट्टिको तहमा हुन्छ । मेलानोसाइट्सले छालाको वरीपरीको भागलाई रंग दिने काम गर्छ । मान्छे गोरो–कालो मेलानोसाइट्सले वरीपरीको कोषिकाहरुलाई दिने रंग अनुसार बन्छ ।
कुनै कारणले रंग बनाउने मेलानोसाइट्स नष्ट भएपछि दुबी हुन्छ । शरीरमा टीसेल नामक कोष हुन्छ, जुन रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ । टिसेलले मेलनासाइटलाई नष्ट गर्छ । मेलनासाइट्स नष्ट भएपछि दुबी हुन्छ शरीरमा । माइकल ज्याक्सनमा यस्तो समस्या थियो, माइकल ज्याक्सन जन्मिदै सेतो होइनन् तर पछि भिटिलिगो भएको थियो । दुबी पनि एउटा फैलन खालको हुन्छ, कुनै दाग नफैलिने खालको हुन्छ ।
फैलिने दुबीले शरीरनै ढाक्छ । यसबाट ‘म नराम्रो देखिन्छु, म कुरुप देखीन्छु, मलाई क्यान्सर हुन्छ, मेरो बिहे हुँदैन’ भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ । हाम्रो नेपालमा यस्तो रोग देखियो भनेर घरबाट बाहिर निस्कन डराउने गर्छन्। मानिसले बुझ्न जरुरी छ । दुबी भनेको छालामा हुने समस्या हो । यो कसैले छुँदैमा सर्दैन । उपचारपछि निको हुन्छ भन्नेकुरा आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ ।
यो समस्या देखिदैमा आत्तिनु हुँदैन । यो कुनै कुष्ट रोग वा क्यान्सर होइन । यो रोग छुँदैमा सर्दैन । मेरो छाला पूरै क्यान्सर हुन्छ वा मेरो जीवनको आयु घट्छ भनेर डराउनु पर्दैन । यो समस्या जुन उमेरमा पनि हुन सक्छ तर २० देखि ४० वर्षको उमेरमा यो समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना बढी रहन्छ । दुबी हुँदैमा कुनै रोग लाग्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन। यो छालाको समस्या हो र यसले अन्य अंगमा कुनै असर गर्दैन ।
यो समस्या भयो भने डाक्टरसँग परामर्स गरेर डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि लगाउने, औषधि खाने गर्नुपर्छ । कुनै औषधि खाएर घाममा देखाउनु पर्ने हुन्छ । फोटो थेरापीको माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ। यदि सबै मेडिकल उपचारबाट भएन भने भिटिलिगो सर्जरी हुन्छ । जसमा नर्मल छाला भएकोे छाला ल्याएर यो समस्या भएको ठाउँमा टाँस्ने खालको सर्जरी हुन्छ । मेलानोसाइट्स प्रत्यारोपण गरर ेपनि दुबीको उपचार गर्न सकिन्छ । आजभोली नेपालमा पनि यो सेवा उपलब्ध छ ।
यो समस्या देखियो भन्दैमा हामीले खाना बार्नु पर्दैन । रबर, प्लाष्टिकबाट बनेको टाइट बेल्ट, जुत्ता, लुगा भने लगाउनु हँुदैन । दुबी भएको ठाउँमा कन्याउने हुँदैन ।
यो रोग निको हुन समय लाग्छ । कसैलाई एक महिनादेखि वर्षदिनसम्म पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा कति यो समस्याबाट पिडित छन् भनेर एकिन तथ्यांक छैन । तर, छालाको समस्या लिएर आउने ३० देखि ४० जनानमध्ये दुई जना यही समस्या लिएर आइरहेका हुन्छन् । विश्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने एकदेखि दुई प्रतिशमा यो समस्या देखिने गरेको छ ।
( छालारोग विशेषाज्ञ डा घिमिरे आवरण स्किन एन्ड हेयर क्लिनिकमा आवद्ध छन् )
Manzita लेख्नुहुन्छ भदौ १९, २०७५ मगलवार १५:१३:३३
Can Melonocitis transplant cure the vitiligo because it has covered post of my skin area and if want to do it how much does it cost and how long will it take.Thats all I want to know. Many thanks
nabraj neupane लेख्नुहुन्छ भदौ ८, २०७५ शुक्रवार २३:४६:०२
मेरो छाती मा यो सेतो धब्बा देखिएको १ महिना जति भयो? यसको उपचार कसरी गर्ने?